Galley Bay Resort & Spa dia manangana Toerana Masina Turtle ao Antigua
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Galley Bay Resort & Spa dia manangana Toerana Masina Turtle ao Antigua
Aprily 17, 2015
LOS ANGELES, Kalifornia - Galley Bay Resort & Spa dia iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny maitso mazoto indrindra amin'ny fanangonana manokana mpikambana Green voamarina ao amin'ny Nosy Antigua. Voamarina voalohany tamin'ny 2009, i Galley Bay dia nanaporofo ny fahombiazany amin'ny maha fizahantany fizahan-tany maharitra azy ary ankafizin'ny mpandeha manerantany.
Galley Bay dia manana lisitra lava be amin'ny zava-bitan'ny tontolo iainana ary hanampy an'ity fandraisana anjara mahatalanjona ity dia misy Turtle Sanctuary vaovao namboarina tao amin'ilay toeram-pivarotana. Namboarina miaraka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, fitaovana eo an-toerana sy avy any an-toerana no nampiasaina nandritra ny fananganana niaraka tamin'ny mari-pamantarana avy amin'ny hazo noforonina tamin'ny hazo voahangy teo an-toerana izay nanintona olona.
Ny mponina voalohany naka trano dia vondron'ireo sokatra mena miompana amin'ny tany izay hokarakarain'ny Grounds Team ao amin'ny resort ho isan'ny fanazaran-dry zareo ny tontolo iainana. Ho fanampin'izany, nisy solontena iray avy amin'ny Sekolin'ny Sekolin'i Nosy dimy any an-toerana nasaina handray anjara amin'ny hetsika fanokafana ny Turtle Sanctuary, satria ny resort dia naka ilay sekoly ary manohana ny hetsika maro samihafa.
Ny mpandrindra ny tontolo iainana, ny fahasalamana ary ny fiarovana an'i Galley Bay, Christine Young, dia teo an-tanana hanampy amin'ny fanokafana ny fitoerana masina ary nilaza hoe, "Taorian'ny lanonana fanapahana kofehy fohy, sokatra 18 no navotsotra tao amin'ny tranony vaovao. Afaka nifandray tamin'ny sokatra tsirairay ireo vahiny, nanana fotoana nananana sary niaraka tamin'izy ireo ary nahazo vaovao avy amin'ny ekipa Grounds momba ny sakafo, fahamatorana, habe ary taona.
"Ao amin'ny Galley Bay izahay dia miezaka ny ho mpitarika indostrian'ny fizahan-tany ary manantena ny hanao an'io faritra io tsy ho fitoerana masina ho an'ny sokatra ihany fa hanintona ny bibidia hafa. Ity fandraisana andraikitra vaovao ataon'ny mpiasanay sy ny mpitantana anay ity dia hanampy anay koa hanana fahatsiarovan-tena bebe kokoa momba ny tontolo iainana eo amin'ireo vahininay sarobidy, ”hoy i Christine.
Ny fanoloran-tena mitohy ataon'ny Galley Bay Resort & Spa amin'ny tontolo maitso dia porofon'ireo fandraisana andraikitra marobe ao amin'ny toeram-pivarotana hiarovana sy hiaro ilay faritra. Anisan'izany ny fanalefahana sy fanodinana fako, fanatsarana ny fahombiazan'ny angovo, fanafoanana ny fako mampidi-doza ary fanofanana tsy tapaka ny mpiasa amin'ny fomba vaovao fanomezana serivisy kalitao. Ho fanampin'izany, Galley Bay dia namorona zaridaina, voankazo ary legioma manokana ho antsika mba tsy hanaterana ireo akora farany tsara indrindra amin'ny latabatra fa hampihena ny dian-tongotry ny karbaona amin'ny tontolo iainana.
Momba ny fanamarinana Green Globe
Green Globe dia rafitra maharitra maharitra miorina amin'ny fenitra eken'ny sehatra iraisam-pirenena momba ny asa maharitra sy ny fitantanana ny orinasan-fizahan-tany sy fizahan-tany. Miasa eo ambanin'ny fahazoan-dàlana manerantany, Green Globe dia monina any California, USA, ary misolo tena ny firenena mihoatra ny 83. Green Globe dia mpikambana iray ao amin'ny United Nations World Tourism Organization (UNWTO).
Momba ny Galley Bay Resort & Spa
Galley Bay Resort Antigua, toeram-piafenana miafina any Karaiba, mahafinaritra ny vahiny miaraka amin'ny rivo-piainana madio sy tsy mendrika ary ny fonosana fialan-tsasatra misy azy rehetra. Ny morontsiraka turquoise mamirapiratra sy ny zaridaina maitso dia mamorona toerana milamina sy voajanahary ho an'ireo izay te hamongotra sy hitsoaka an'izao tontolo izao. Ny toerana ifantohana dia ny morontsiraka fotsika fotsy telo-kilaometatra eo amoron'ny morontsiraka Karaiba madio sy mafana, izay ahafahanao miondrika eo amin'ny aloky ny hazo rofia, mitafy ny masoandro na mankafy milomano mamelombelona sy fanatanjahantena tsy misy maotera maimaimpoana. .
Green Globe dia mpikambana ao amin'ny Fiaraha-miasa iraisan'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany (ICTP) .